10ka buurood ee aduunka ugu dhaadheer 10 buurood aduunka ugu dhaadheer | Wararka Safarka
10ka buurood ee aduunka ugu dheer
Dhamaanteen waan ognahay waxa ay tahay Buurta ugu dheer adduunkaLaakiin intee in le'eg ayaan ognahay kee buurta labaad ama saddexaad ama afraad buurta adduunka ugu dheer? Caan ka noqoshada waa wax walba, ugu yaraan adduunyo sidaa maadi ah oo ku saleysan guusha ay tahay inaan ku noolaano.
Laakiin dabcan, waxaa jira adduun buuro ah oo ka dambeeya Mount Everest, oo ah buurta adduunka ugu dheer, oo aamin ama ha rumaysan 10ka buurood ee aduunka ugu dheer dhamaantood waa Aasiya. Ma ognahay?
1 Buurta Everest
2 Buurta Karakoram
Buurta Everest Dhererkiisu waa 8.848 mitir wuxuuna ku yaal Himalayas, oo ku taal Tibet, waa ismaamul ka tirsan Shiinaha. Reer Yurubkii ugu horeeyey ee fuulaa waxay ahaayeen Tenzing Norgay iyo Sir Edmund Hillary, 1953.
Everest waxay leedahay buugaag, sawirro aruurin, iyo xitaa filimaan. Maalmahanna kama yarayn sawirradaas cambaareynaya in dusha sare ay noqdeen wax u eg Maka. Waxaana jira dad aad u tiro badan oo saf ugu jira inay halkaas gaaraan oo cabsi leh!
Sannadba sanadka ka dambeeya, xilliga fuulitaanka, dadku waxay ka kala yimaadaan adduunka oo dhan kuwaasoo iskudaya inay midoobaan, mararka qaarkoodna nasiib iyo marna maahan, Saldhigga Saldhigga oo leh kan ugu sarreeya. Kuwa aan heerkaas sare gaadhin wali waxay ku raaxaystaan ​​socodka adag ee xerada lafteeda.
Buurtaan waa inta udhaxeysa Pakistan iyo Shiinaha oo cabirkeedu yahay 8.611 mitir. Badanaa waxaa loo soo gaabiyaa gaabinta K2 waxaana magaca ku bixiya ogeysiiska uu isticmaalay sahaminta weyn ee 'Trigonometric Survey' ee British India. Waqtigaas waxay u egtahay in buurtu aysan lahayn magac sax ah, sidaas darteed magacaas ayaa hadhay.
Kuwo badan waxay buurtaas ugu yeeraan «mid duurjoog ah» runtiina, haddaad aragtay nooca cusub ee filimka Limit Point (Qodob jabis), waxay kuguula eegi doontaa adiga aqoon. Filimkii '90s', oo uu jilayo Keanu Reeves, wuxuu lahaa jilaayaal jilicsan oo halis ah laakiin remake xamaaliyeyaasha ayaa noqda kuwa fuula. Halkaasna K2 ayaa marinkeeda ka dhigaysa.
Waxaa loo arkaa a buur adag, dhib badan in fuulo, aad uga badan walaashiis ka weyn. Waxay u muuqataa in K2 tWaxay leedahay heerka labaad ee dhimashada marka la eego fuulitaanka dhammaan buuraha dhererkoodu yahay 800 mitir. 77 dhimasho waxaa lagu tiriyaa wadar ahaan 300 guul fuulid ah xagga sare.
Hal macluumaad oo dheeri ah: dusha sare waligood lama gaadhin xilliga qaboobaha illaa 2020.
Buurtani waxay ku dhex taal Himalayas, inta u dhaxaysa Nepal iyo India, oo dhererkiisu yahay 8.586 mitir. Saddex ka mid ah meelaha ugu sarreeya waxay ku taal xadka u dhexeeya labada ummadood labada kalena waxay ku yaalliin degmada Taplejung, ee ku taal Nepal.
Tani waxay ahayd buurta adduunka ugu dheer ilaa 1852 mana aha in jiritaanka ama dhererka Everest aan la ogeyn, laakiin sababta oo ah xisaabinta ayaa khalad laga dhigay. Daraasad cusub kadib waxaa la ogaaday in, dhab ahaantii, Buurta Kangchenjunga aysan ahayn tan ugu sareysa adduunka ... haddii aysan ahayn tii saddexaad!
Sidoo kale Himalayass, inta u dhaxeysa Nepal iyo Tibet. Waxay leedahay 8.516 mitirsy runtii waa buur aad caan u ah maxaa yeelay runti aad bay ugu dhowdahay in la fuulo habeennimada. Wadada loo maro dusha sare ee Lhotse waa isku mid kor u kaca Everest, laga bilaabo Xerada Everest Base, ilaa ay ka gudubto xerada 3, ka dibna waxay aadeysaa dhanka wadada Reiss Corridor ee ka timaada Lhotse Face, halkaas oo laga gaaro shirarka.
Waxaan dhihi karnaa Lhotse waa wax la mid ah walaalka yar ee Everest. Waa soo jiidasho yar tahay sidaa darteedna had iyo jeer waxay leedahay dad ka yar - Meel sarreysa ugu sarreysa waxaa markii ugu horreysay la gaaray 1956, halka waxa loo yaqaan Lhotse Middle ay sii jirtay muddo dheer, tobanaan sano, oo aan la baarin. Aakhirkii, waxay gaadhay meeshii ugu sarraysay sannadka 2011, iyada oo ay gacanta ku hayso safar Ruushka ah
Buurtani waxay ku taal Himalayas, sidoo kale inta udhaxeysa Nepal iyo Tibet, waana 8.485 mitir. Waa buurtii saddexaad ee ka badata 8000 mitir Everest massif, Nepal. Safar Faransiis ah wuxuu gaaray heerkiisii ​​ugu sarreeyay 1955 markii ugu horreysay.
Waxay ahayd arrin muhiim ah maxaa yeelay wadar ahaan 10 sahamiyayaal ah ayaa halkaas ka kacay, markii waxa caadiga ahaa ee waqtigaas ahaa in mid ama laba ka mid ah kooxda oo dhan ay nasiibkaa lahaayeen.
Waxay ku jirtaa Himlaayas, inta udhaxeysa Nepal iyo Tibet, waana 8.188 mitir. Waxay ku fadhidaa lambarka lixaad ee buuraha ugu dhaadheer adduunka waana kan afraad ee ka tirsan kooxda la xushay ee buuraha dhererkoodu yahay 8 kun mitir.
Waa buur "wanaagsan", in kasta oo dhererkiisu dheer yahay waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee la fuulo. Sababta Maxaa yeelay, dhaadhacyadiisu waa kuwo deggan oo tartiib tartiib u kaca. Intaa waxaa sii dheer, waxay u dhowdahay marinka Nang La Pass, oo dhowr kiilomitir u jira jidkan ganacsi ee caanka ah ee u dhexeeya Tibet iyo Khumbu Sherpas.
Buurtan waxay ku taal Nepal waana 8.167 mitir. Waxay umuuqataa mid aad ufudud waxaana markii uguhoreysay lahadlay May 13, 1960. Aad ayey caan uga tahay gudaha Wareegtada Annapurna maxaa yeelay waxay umuuqataa mid qumman.
Wareegga 'Annapurna' waa, haddii aad jeceshahay socodka, waa waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid. Waa waddo weyn oo ku taal Himalayas oo daboolaysa 145 kiiloomitir oo muuqaal ah buuro leh. Ka gudub kaararka Thorong-La, oo dhererkiisu yahay 5.416 mitir, baaska ugu sarreeya ee adduunka laga maro, waxaad galeysaa Canalka Kali Gandaki, kan ugu qoto dheer adduunka, saddex jeer ka qoto dheer Grand Canyon ...
Sikastaba xaalku ha ahaadee, buurta waa la go'doomiyey, oo dunida inteeda kale looga soocay isla canyonka, sidaa darteed kaarka boostada ayaa xitaa ka sii yaab badan oo ka xoog badan.
Buurta Waxay ku taalaa Nepal waxayna dhererkeedu gaarayaa 8.163 mitir. Magaceedu wuxuu ka yimid Sanskrit «manasa«, Oo macnaheedu yahay naf ama caqli. Toshio Imanishi iyo Gyalzen Norbu waxay markii ugu horreysay isku dayeen inay gaaraan heerkoodii ugu sarreeyay bishii Maajo 9, 1965, iyagoo safar Japan ah.
Dhimashadiisu ma ahayn muran la'aan. Waxay umuuqataa in dadka deegaanku uga digeen xubnihii safarka ahaa inaysan kor u qaadin wax walba, maxaa yeelay isku dayyadii hore waxay ka caroodeen ilaahyada waxayna soo saareen baraf ay ku dhinteen 18 qof ...
Safarku wuxuu ugu deeqay lacag dib u dhiska macbadka la jajabiyey, laakiin wali nasiib uma yeelan oo Shirka waxaa kaliya lagu gaaray safar cusub oo Jabbaan ah laakiin 1971.
Buurtan dheer Waxay ku taal Pakistan oo waa 8.126 mitir. Waxay ku taalaa Degmada Dheer, ee Gilgit Baltisan Gobolka, galbeedka Himalayas. Magaceeda sidoo kale wuxuu ka yimid Sanskrit oo macnaheedu yahay "buur qaawan."
Waa a buur dheer, oo ku wareegsan dooxada cagaarans meel walba. Wejiga Rupal waa mid qurux badan, oo dhererkiisu yahay 4.600 mitir salkiisa.
Buurtan waxay ku taal Nepal waana 8.091 mitir. Waa mid ka mid ah buuraha ugu caansan adduunka waana sababta saxda ah wareegga socodka ee aan horay uga soo hadalnay. Waxay ku jiri kartaa booska 10 laakiin nasiib daro wuxuu leeyahay heerka dhimashada ugu sareysa ee dadka fuushan liiska oo dhan in aan hadda ku taxnay.
32% isku dayga ah in la gaaro dhamaadka ugu sarreeya ee dhimashada. Wareegga waxa ay sameyneyso ayaa wareegaya buurta waxayna ka bixineysaa aragtiyo Dhaulagiri illaa socodka buuraha ee Annapurna Massif. Waxaa jira wadooyin loo maro Annapurna Sanctuary, taas oo aan ka badnayn Saldhigga Xerada, si loogu sii wado fuulitaanka meelaha ugu sarreeya, oo aad caan u ah.
Ilaa hadda waxaan la nimid 10ka buurood ee aduunka ugu sareeya. Ma ogtahay waxa lambarka 11 yahay? Buurta Gasherbrum I, oo ku taal xadka u dhexeeya Shiinaha iyo Pakistan, oo leh 8.080 mitir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Guides » 10ka buurood ee aduunka ugu dheer